Otu esi eme akwa igbe di na osisi na osisi ude | Crafts Na
Otu esi eji igbe osisi na ice cream mee igbe ọla
Claudi ego | | Crafts, Nzughari
N’oge gara aga, otu enyi m jụrụ m ma m nwere ike imere ya igbe ịchọ mma ka ọchekwa ihe ịchọ mma ya. Ọ bụghị nwa agbọghọ ga-ebu ọtụtụ ihe, ma ọ na-echekwa nnukwu ihe. Ekpebiri m imere ya nke ikpeazụ a, ma nweta ya ebe ọ ga-edebe ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma otu esi eme igbe ọla na mkpisi osisi ice cream na mpempe akwụkwọ, gụọ akwụkwọ!
Pensụl ma ọ bụ ihe nrịbama
Agba abụọ eva roba (otu ma ọ bụrụ na ọ bụ aja aja)
Soro onye na-achị achị soro (Ejiri m aha iji mee ka ọ bụrụ ihe ọhụụ) isi na nkuku. Site na enyemaka nke kompas na nkuku, dozie ya n'etiti, nke mere na ị ga-enweta ọkara okirikiri. Nwere ike ime ka nkuku ahụ daa kpamkpam, emeere m 10cm x 10cm.
Jiri nwayọ belata ọnụ ọgụgụ niile anyị sere.
Ghichaa nkuku na gluu ọcha. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọkarị izu oke ma chọọ akụkụ aka nri, jiri ihe ọ bụla nwere ihe kwụ ọtọ nwere ezi akụkụ iji kwado ya. Mgbe minit 5 ọ ga - ejide onwe ya.
Mgbe nkeji 5 gafere maka nkuku na-esochi, gbutuo ogologo ogologo nke roba roba. Mgbe ahụ ụzọ dị iche iche maka ịchọ mma.
Malite gluing osisi popsicle, Na ihu na azụ n'akụkụ. Mgbe ahụ mee otu ihe ahụ na semicircle. Tụkwasị na gluu osisi n’elu ha.
Na akụkụ ikpeazụ, ha nwere ike ọ gaghị adaba na gị. Echegbula onwe gị, bepụ osisi mkpịsị aka ma ọ bụ abụọ ka isi niile wee rụchaa nke ọma.
Ghichaa eriri ogologo nwere ọdụ bara ụba site na azụ gaa ebe igbe ọla ga-emeghe.
Ebe na gluu abụọ dị gburugburu acha uhie uhie na ihu iji mechaa igbe ọla.
Nwere ike inye ya aka nke onwe site n’ihu. Mefe foto, ide akwụkwọ ozi ụfọdụ, wdg. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ahaziri na ndị ọzọ flirtatious. Echere m na a gbara gị ume ime igbe ọla a, ọ dị mfe ịme!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Otu esi eji igbe osisi na ice cream mee igbe ọla
Anyị na-eme ka odida obodo na ite gbajiri agbaji
Otu esi eme "mkpisi mmiri" ya na akwukwo akwukwo na noodles